इजरायल जानका लागि प्रक्रिया कसरी अघि बढाउनु पर्छ ?
Sun, May 27, 2018 | 19:27:38 NST
प्रकाश लिम्बू / फिदिम, पाँचथर
प्रश्नः इजरायल जानका लागि प्रक्रिया कसरी अघि बढाउनु पर्छ ? मैले एसएलसी पास गरेको छु। अरु कुनै तालिम लिएको छैन्।
उत्तरः प्रकाश जी, केयर गिभरका काममा मात्रै इजरायल जान सकिन्छ। त्यसैले त्यस काममा चाहिने सिपका लागि तालिम अनिवार्य लिएको हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट मान्यता प्राप्त वा वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचिकृत भएका संस्थाले तीन महिनाको केयर गिभर सम्बन्धी तालिम दिने गरेका छन्। अथवा मान्यता प्राप्त निकायबाट प्राक्टिकल नर्सिङ पूरा गरी प्रमाणपत्र लिएकाहरुले पनि केयर गिभरका लागि आवेदन दिन सक्छन्। एसएलसी पास गरेको र प्रमाणपत्र तहको अंग्रेजी भाषा सम्बन्धी ज्ञान चाहिन्छ। केयर गिभरमा जान चाहनेको उमेर २५ वर्ष पूरा भएको र ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। पाँच फिट उचाई र ४५ केजी भन्दा बढि तौल भएको हुनुपर्छ। योग्यता पुगेका उम्मेद्वारको आवेदन काठमाडौंमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले संकलन गर्छ। र इजरायल पठाउँछ। आवेदनका आधारमा इजरायलको पपुलेसन एण्ड इमिग्रेसन अथोरिटीले कामदार छनौट गर्छ।